Home News Wasiir Islow oo Ka Hadlay Nin Ka Tirsanaa Al Shabaab oo ay...
Wasiir Islow oo Ka Hadlay Nin Ka Tirsanaa Al Shabaab oo ay Ciidamada Amaanka Ku dileen Qeybo Ka Mid ah Degmada Yaaqshiid
Wasiirka amniga xukuumada federaalka soomaliya maxamed abuukar islow ducale,, ayaa ka hadlay dil maanta ka dhacay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir.
Ciidamada amaanka ayaa toogtay ni la sheegay in uu ka tirsanaa kooxda al shabaa kaasi oo ruux shacab ah ku dilay xaafada suuq bacaad ee degmada yaaqshiid.
Wasiirka ayaa sheegay in ciidamada amniga ay u suurta gashay iney toogtaan ninka ka tirsanaa al shabaab ee qofka shacabka ah ku dilay agagaarka xarunta degmada yaaqshiid.
Wasiir islow ayaa ku dhiiragilayay ciidmada amaanka sida ay marwaliba ugu taagan yihiin sugida amniga caasimada.
Ilaa iyo haatan wax war ah kama soobixin kooxda al shabaab oo ku aadan ninka lagu dilay xaafada suuq bacaad oo ay dowladda sheegtay inuu ka tirsanaa al shabaab.
Sikastaba ha ahaatee waxaa siikordhaysa falalka amni daro ee ka dhacaya gobolka baanadir.
Previous articleCiidamada Amaanka Degmada Yaaqshiid oo Toogtay Nin Hubeysnaa
Next articleJubbalnd oo Amisom Kala Hadashay Sidii Deegaanada Maamulkaasi Looga Xorey Lahaa Kooxda Al Shabaab
Xildhibanada Aqalka Sare oo Maanta Kulmaya & Ajandayaal Muhiim Ah oo...